Pochettino oo walwal hor leh ku abuuray taageerayaasha kooxda PSG kahor kulanka Real Madrid – Gool FM
Dajiye January 24, 2022
(Paris) 24 Jan 2022. Tababaraha kooxda Paris Saint-Germain ee Mauricio Pochettino ayaa xaqiijiyay in aan wali la xaqiijin ka qeyb galka xiddiga reer Brazil ee Neymar Jr kulanka Real Madrid ee Champions League.
Labada kooxood ayaa ku wada ciyaari doona garoonka Parc des Princes ee magaalada Paris 15-ka bisha February lugta hore wareega 16-ka ee tartanka Champions League, kahor inta ayna garoonka Santiago Bernabeu ee Madrid dhaca marti galin kulanka lugta labaad 9-ka bisha March.
Sida laga soo xigtay wargeyska Marca ee dalka Spain Mauricio Pochettino ayaa mar uu warbaahinta la hadlayay wuxuu yiri:
“Weli ma garanayno haddii Neymar uu taam u noqon doono kulanka Real Madrid.”
“Waxaan eegi doonaa soo kabsashadiisa todobaadka soo socda, waxa uu diyaar u noqon doonaa in uu ka qayb galo hadii ay arimuhu si fiican u socdaan, waxaan rajeyneynaa inay sidaas dhacdo, laakiin weli ma garanayno.”
Si kastaba ha ahaatee, Neymar ayaa dhaawac canqowga ah ka soo gaaray kulankii ay kooxdiisa la ciyaartay Saint-Etienne, kulan ka tirsanaa horyaalka Faransiiska ee Ligue 128-kii November, tan iyo markaas ma uusan kala qeyb galin PSG wax kulan ah.
Jamaahiirta Paris Saint-Germain ayaa rajaynaya in Neymar uu awoodi doono inuu soo laabto kahor kulanka Real Madrid si loo xoojiyo awooda kooxda isla markaana ay uga gudbaan imtixaanka horyaala.